Ifashoni yeHlabathi: Indima yeTaiwan neSri Lanka kwinkcubeko yehlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka » Ifashoni yeHlabathi: Indima yeTaiwan neSri Lanka kwinkcubeko yehlabathi
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Iindaba zefashoni • Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo
Oktobha 13, 2021
Ngo-Okthobha u-6th, iTaipei Fashion Week yasungula ngokusesikweni "Ifashoni yeXesha lethu," umboniso okhokelela kubaphulaphuli ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane senkumbulo yefashoni yaseTaiwan ngeziganeko zehlabathi lokwenyani kunye namabali efoto.
IVeki yeFashoni yaseTaipeh izakubonisa imisebenzi yoqobo ngabaqambi abaziwayo baseTaiwan, ebonisa indlela ii-eras ezahlukileyo ezichaphazele ngayo ishishini lefashoni yasekhaya kunye nendlela eyabonakaliswa ngayo ifashoni eTaiwan ngala maxesha. Ixhaswe nguMphathiswa Wezenkcubeko, umboniso weFashoni yeXesha lethu ususela kwiminyaka yoo-1950, eyayilixesha legolide kushishino lwempahla eyolukiweyo yaseTaiwan, yonke indlela ukuza kuthi ga kweli xesha langoku.
Ngokuphinda kuveliswe imiboniso eyimbali, imiboniso yefashoni, kunye neekholamu ezichazayo, ababukeli baya kuba nakho ukuyiqonda ngcono imbali yeshishini lefashoni laseTaiwan, kunye nemeko yenkcubeko kunye nobuhle.
“Abaqulunqi befashoni bezizukulwana ezahlukeneyo, xa bejamelene nemiceli mngeni ngamaxesha ahlukeneyo kunye nokwanda kwokhuphiswano lweemarike zamanye amazwe, bahlala begcina umdla ongalawulekiyo kwifashoni,” utshilo uFlorence Lu, uMgcini weMbali yeFashoni eTaiwan.
Umxholo wokulungiswa kweFashoni yeXesha lethu umema ababonisi ukuba bahambe ngesithuba kunye nexesha lokuba babuyele kwii-eras zangaphambili zefashoni yaseTaiwan. Ukusuka kumzi mveliso wempahla eyilitye lembombo ngeminyaka yoo-1950 ukuya kutsho kwiminyaka yanamhlanje yenguqu kwidijithali kwimithombo yeendaba zefashoni, umboniso ubonakalisa indlela abayili neempawu zalapha ekhaya nabaqhubeka ngayo ukusebenzisa ifashoni ukuchaza indima yeTaiwan kwinkcubeko yehlabathi.
Kanye nokusungulwa komboniso weFashoni yeXesha lethu, iTaipei yeVeki yeFashoni ibambe umsitho wama-35 wonyaka we-Taiwan Fashion Design Awards owawubanjwe yi-Ofisi yoPhuhliso lwezoShishino, i-Ofisi yoMphathiswa Wezomnotho ngo-Okthobha u-6.
Ukusuka phantse kubathathi-nxaxheba abangama-450 abavela kumazwe ali-18 aqala iYurophu, iMelika kunye neAsia, ii-rookie zefashoni ezili-12 zazibonakalisiwe kwinqanaba lomdlalo elinamandla.
Ibhaso lokuqala laya kuGajadeera noRuwanthi Pavithra waseSri Lanka ngomsebenzi wabo "weFashoni eZinzileyo / eyolukiweyo kunye nezobugcisa bendabuko". Amabhaso okwindawo yesibini aya ku Yeh, Yu-Hsien's “Mirage” no Chen, Ching-Lin's “Ziyephi zonke iintyatyambo.” Iveki yeTaipei yeFashoni iqala ukusukela ngoku ukuya ngeCawa, nge-17 ka-Okthobha.